လေကြောင်းကယောဘဖျေါပွခကျြ Inspectors / တာဝန် Template ပြီးတော့လုပ်ငန်းများ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / လေကြောင်းကယောဘဖျေါပွခကျြ Inspectors / တာဝန် Template ပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
လေကြောင်းကယောဘဖျေါပွခကျြ Inspectors / တာဝန် Template ပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 524 views
လေကြောင်းသွားလာမှုအကူအညီအထောက်အပံ့များကိုစစ်ကြော, ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုနည်းလမ်းများ, လေယာဉ်ပျံ, လေထုအသွားအလာစည်းမျဉ်းများ, နှင့်အီးမေးလ်များကိုထုတ်ကုန်ဖက်ဒရယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေများကိုသုံးပြီးအချို့ထိန်းလိုက်နာအပ်သောအောင်.
လေယာဉ်ရွေ့လျားမှုကွပ်မျက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏ function ကိုစစ်ကြော, ပွောငျးလဲခွငျး, သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ချက်နှင့်နည်းစနစ်ရန်သေချာထိန်းသိမ်းလိုက်နာမှုစေရန်လေယာဉ်နှင့်လေယာဉ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်များပြုပြင်နှင့်ခေတ်မီ.
လေ့လာမှုလေယာဉ်ဝင်ရောက်ခြင်း discs တွေကိုနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်အခွင့်အလမ်းများ.
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြောင်းရယူပစ္စည်းများ, တာယာ, နှင့်ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏မျက်နှာစာ, အတောင်ပံ, နှင့်ပြုပြင်ရေး၏အရေးပါမှုနှင့် ပတ်သက်. အင်ဂျင်အဖြစ်သက်သေပြပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ယိုယွင်းပျက်စီးလာ.
ပြင်ဆင်ပါနဲ့ restore ပြည့်စုံထိန်းသိမ်းခြင်းကိုဆက်လက်, ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း, လေ့လာချက်, နှင့်အောင်လက်မှတ်ဖိုင်တွေနဲ့ပုံပြင်များ.
အသစ်သောစစ်ကြော, သတ်မှတ်ထားတဲ့, စံချိန်စံညွှန်းများမှ airworthiness နှင့်ထိန်းလိုက်နာအပ်သောဆနျးစစျဖို့လည်းယူဖျက်ဆီးခြင်းသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းချက်အသိအမှတ်ပြုရန်သို့မဟုတ်ပြုပြင်ထားသောလေယာဉ်ပျံ, စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းအသုံးချဖို့, လက်-tools များ, နှင့်စာမေးပွဲ devices များ.
အလုံးစုံစစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့နှင့်အကူအညီနှင့် upkeep အကဲဖြတ်သတ်မှတ် Duration မှာကောက်ယူခဲ့ကြပါလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဝန်ဆောင်မှုအဖိုင်တွေနဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်မှတ်တမ်းများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ.
မြင်ခြင်းနှင့်လေယာဉ်တင်အစီအမံ features တွေစတင်ဖို့, နှင့်အခြား tools တွေနဲ့တူရိယာပျက်ကွက်၏အထောက်အထားရှာဖွေတွေ့ရှိရန်.
အစားထိုးအကြံပြု, ပုံသေတပ်ထား, လေယာဉ်ကိုဂီယာသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်.
လမ်းညွှန်ချက်အတွက်ရှေ့နေအပြောင်းအလဲများ, မူဝါဒများ, မျှော်လင့်ချက်များ, နှင့်စည်းမျဉ်း, အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွအေနမြေား၏နားလည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး, လေယာဉ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု, နှင့်အခြားအချက်များ.
tools တွေထုတ်ကုန်ကိုစစ်ဆေးလေယာဉ်စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်များကိုလုပ်ဆောင်, အမျိုးမျိုးသောပြဿနာများအောက်တွင်နှင့်အစီအစဉ်များနည်းလမ်းများ, အလိုအလျောက်နှင့်လက်စွဲစာအုပ်နှစ်ဦးစလုံးလက်ကိုင်အလုပ်သမား.
ထုတ်ပေးရေး Accept သို့မဟုတ်ငြင်းဆန်.
ပညာရေး applications များအကဲဖြတ်ရန်နှင့် functioning လူများ၏ကျွမ်းကျင်မှုသေချာစေရန်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်ခံတွင်းစမ်းသပ်မှုလုပ်ဆောင်သွားရန်, ဖြည့်စွက်, နှင့်လေယာဉ်စက်ကိရိယာများကိုပြုပြင်တာတွေ.
အစီအစဉ်နှင့် In-ပျံသန်းစစ်ဆေးနေ tools များဖို့သေချာအသုံးပြုနိုင်စွမ်းစေရန်မြေပြင်သမားတွေနှင့် Air-အသွားအလာထိန်းချုပ်အတူနေဖြင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခံအစီအစဉ်များတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်, ကြမ်းပြင်ခြေရာခံခြင်း, နှင့်ဆက်စပ်ပေးသူများ.
အလုပ်-related စာတမ်းများအတွက်အသိပညာ-သိမှတ်ကြလော့အပိုဒ်နှင့်ပြင်ဆင်ထားစာကြောင်း Reading.
အခြားသူများကိုမြေတပြင်လုံးအာရုံစူးစိုက်မှုပေးခြင်းအခိုင်အမာအဘယ်အရာကို active-နားထောင်ခြင်း-ရန်, created ခံရသည့်အချက်များကိုနားမလည်ဖို့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီး, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးခွန်းများကိုအံ့သြ, အစားမသငျ့လျြောဖြစ်ကြောင်းအခြေအနေများမှာလမ်းပြနေထက်.
အားနည်းချက်များကိုနှင့်အစားထိုးရွေးချယ်မှုများ၏အားသာချက်ကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ Criticalthinking-အသုံးချပြီးတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်ဆင်ခြင်ခြင်း, ကိစ္စများမှကောက်ချက်သို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်မှု.
နှစ်ဦးစလုံးသည်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်လာမည့်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. တက်ကြွစွာ-သင်ယူ-နားလည်မှုအသစ်သောသတငျးအခကျြရဲ့ဖုံးကွယ်နှင့်.
သင်ယူခြင်းနည်းလမ်းများ-အသုံးချပြီးနှင့်လတ်ဆတ်သောအချက်များကိုကျွမ်းကျင်သို့မဟုတ်ပညာပေးသည့်အခါအခြေအနေကတငျပွ trainingANDinstructional မဟာဗျူဟာများနှင့်ကုသရွေးချယ်ရာတွင်.
ကော်ပိုရေးရှင်း၏စောင့်ကြည့်ခြင်း-OverseeingORExamining ထိရောက်မှု, အခြားအရှေးရှေး, သို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုမှန်ကန်သောခြေလှမ်းများယူသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုထုတ်လုပ်ရန်.
လူမှုသူတို့လုပ်ပေးအဖြစ်သူတို့တုံ့ပြန်ဘာဖြစ်လို့ othersA တုံ့ပြန်မှုမသိအမြင်-ဖြစ်ခြင်းနှင့်နားလည်နိုင်မှုရှိစေရန်.
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. Dexter-မွမ်းမံလုပ်ရပ်များ’ ခြေလှမ်းများ.
အဆင့်မြင့်ရှုပ်ထွေးကိစ္စများပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်-ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်မှုစဉ်းစားပါနဲ့ options လျှောက်ထားရန်နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဒေတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်.
အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း-Creating သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီအလိုဆန္ဒများများကို tools များနှင့်အင်ဂျင်နီယာရှိခြင်း.
installation-ထည့်သွင်းခြင်း devices များ, ထုတ်ကုန်, cabling, ယေဘုယျအားဖြင့် features တွေဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ် applications များ.
တော်တော်များများရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုနှင့် ပတ်သက်. programming-ထုတ်လုပ်ကွန်ပျူတာ applications များ.
စစ်ဆင်ရေးခြေရာကောက်ကြည့်နိုင်သောစမ်းသပ်မှု, နာရီမျက်နှာပြင်, သို့မဟုတ်အခြားရောဂါလက္ခဏာများကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်နေတဲ့စက်ကိုလည်းမရှိကြောင်းသေချာစေရန်.
function နဲ့စီမံခန့်ခွဲ-ထိန်းချုပ်ခြင်း devices များသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို.
ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကြောင်းကိုဝန်ဆောင်မှုအကို Maintenance-ပွုလုပျခွငျးနှင့်အခါ upkeep ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုလိုအပ်ဖော်ထုတ်.
မရှိမဖြစ်သောတူရိယာအသုံးချဖို့ပြုပြင်ခြင်း-ပြုပြင်ခြင်း devices များသို့မဟုတ်မော်ဒယ်များ.
ထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း-Completing အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်, ကုမ္ပဏီများမှ, သို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးထိရောက်မှုသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုမှန်းရန်.
အများဆုံးသင့်လျော်သောတဦးတည်းရွေးချယ်ဖို့တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အပြုအမူ၏အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း-အတွေးအခေါ်.
systems တစ်ဦး technique ကိုအလုပ်လုပ်သင့်တယ်ဘယ်လောက်အားသုံးသပ်ခြင်း-ကိုစူးစမ်းခြင်းနှင့်အခြေအနေများအတွက်ဘယ်လောက်တိုးတက်မှု, လုပ်ငန်းဆောင်တာ, နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးကျိုးများ impact ပါလိမ့်မယ်.
oneis ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချိန်နှင့်အတူတခြားသူတွေရဲ့ကာလ Timemanagement-စီမံခန့်ခွဲ.
ဝင်ငွေခြောအလုပ်ပြည့်စုံရှိသည်ဖို့အသုံးကြလိမ့်မည်ကိုဘယ်လိုငွေ-ကိုစူးစမ်း၏စီမံခန့်ခွဲမှု, နှင့်စာရင်းကိုင်သည်ဤအခကြေးငွေနှင့် ပတ်သက်..
ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်များ-ရှာဖွေခြင်း၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်အဆောက်အဦ၏သင့်လျော်ပါသည်ဖို့ကြုံနေရ, ဂီယာ, နှင့်ထုတ်ကုန်အလုပ်မရွေးပါဘူးမှအလေးအနက်ထားလိုအပ်.
ဝန်ထမ်းရေးရာအရင်းအမြစ်များ-ရယူ၏စီမံခန့်ခွဲမှု, အားတက်စရာ, သူတို့အလုပ်လုပ်သောကွောငျ့လူတွေကိုလမ်းညွှန်, သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ထိပ်ကလူကွဲပြားခြားနားသွား.
High School တွင်ဘွဲ့ (သို့မဟုတ် GED သို့မဟုတ်အကြီးတန်းကျောင်းနှင့်ညီမျှလက်မှတ်)
Link ကိုဖွင့်ပမာဏ (သို့မဟုတ်အခြားနှစ်နှစ်ငွေပမာဏ)
ကျော်လွန်2နှစ်ပေါင်း, ပတ်ပတ်လည်နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအပါအဝင်
ဇွဲ – 88.91%
အကွောငျးရငျး – 89.31%
ခေါင်းဆောင်မှု – 76.80%
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး – 85.60%
အခြားသူများအဘို့စိုးရိမ်ပူပန် – 91.03%
လူမှုအရှေ့တိုင်းဆန် – 94.07%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 89.80%
ဖိအားစာနာထောက်ထားရေး – 84.00%
ဘက်စုံ / ဘက်စုံသုံး – 80.00%
မှီခို – 94.33%
အသေးစိတ်၏အသိအမြင် – 98.40%
ရိုးသားခြင်း – 96.99%
လွတ်လပ်ရေး – 90.65%
တီထွင်ဖန်တီးမှု – 79.13%
စဉ်းစား – 92.60%